Kuvela elikaKelly kwelokufa kukaMeyiwa - Ilanga News
Home Izindaba Kuvela elikaKelly kwelokufa kukaMeyiwa
Ummeli uthi kunofakazi ozokhomba yena
LISEMATHENI igama lomculi wakuleli, uKelly Khumalo, ngemuva kokuba kuvele eNkantolo eNkulu ePretoria izolo ukuthi kunofakazi ozobizwa, ozokhomba yena uKelly njengomuntu “owadubula ngephutha” uSenzo Meyiwa (osesithombeni) owayengunozinto we-Orlando Pirates neBafana Bafana ngo-2014. Izolo ngoLwesithathu u-Advocate (Adv) Malisela Teffo, esephetha ukuhlohla ngemibuzo uSergeant (Segt) Thabo Mosia, osohlangothini loMbuso, uveze ukuthi kunomuntu owazibonela, ozosho ukuthi nguKelly owadubula uMeyiwa ngephutha. U-Adv Teffo uthi lowo fakazi uzokwethula nobufakazi bokuthi leso sibhamu esadubula uMeyiwa safika noLongwe Twala, oyindodana kaChicco Twala.
Uveze nokuthi lowo fakazi uzophinde atshele inkantolo ngomhlangano ‘oyimfihlo’ owaba sendaweni yesigameko, emuva kwesigameko sokubulawa kuka Meyiwa, okuthiwa kwakukhona kuwona izikhulu zamaphoyisa esifundazweni iGauteng, noNkk Sizakele Nkosi-Malobane, owayengungqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi eGauteng ngaleso sikhathi. Lowo fakazi owazibonela, ngokusho kuka-Adv Teffo, uzothula ubufakazi bokuthi kulowo mhlangano kwakudingidwa ukuthi lizofihlwa kanjani iqiniso ngesigameko. Uzophinde atshele inkantolo futhi ukuthi ukuhanjiswa kuka Meyiwa esibhedlela kwakwenziwa ngenhloso yokuyoshiya isidumbu sakhe ngoba uMeyiwa washonela endaweni yesigameko.
Namhlanje ngoLwesine kuyaqhubeka ukuhlohlwa ngemibuzo kukaSgt Mosia. Njengamanje u-Adv Zandile Mshololo omele umsolwa wesihlanu, uMnu Fisokuhle Ntuli, nguyena opheka ngemibuzo uSgt Mosia ongufakazi wokuqala kofakazi okulindeleke ukuba babizwe kuleli cala. NgoLwesibili, u-Adv Teffo omele abasolwa abane, kusukela kowokuqala kuya kowesine utshele inkantolo ukuthi ekuqaleni, abophiko lwezokushushisa iNational Prosecuting Authority (NPA), babephezu kohlelo lokushushisa bonke ababesendlini ngosuku lwesigameko.
Uthi ngokwelinye idokodo elagcina lingasebenzanga, umsolwa wokuqala kwakunguLongwe Thwala, kube nguKelly Khumalo umsolwa wesibili, kube nguGladness Khumalo (unina kaKelly) umsolwa wesithathu, uZandi Khumalo engumsolwa wesine, kuthi uTumelo Madlala yena abe engumsolwa wesihlanu, uMthokozisi Twala engumsolwa wesithupha, kanye noMaggie Phiri owayengumsolwa wesikhombisa. Uthi kodwa ngokuhamba kwesikhathi, iNPA yalulaxaza phansi uhlelo lokushushisa laba ababesendlini, iminwe yabe isikhomba laba basolwa abasenkantolo njengamanje, ngokusho kwakhe abaphendulwa imvu yomhlatshelo
Previous articleKusolwa umfundisi ngokufa komfana (13)
Next article05 JUNE 2022